Ivenkile yeempahla - i-Etagtron, Inc.
Isisombululo seVenkile yeMpahla
Amasango afakelwe emnyango wevenkile, ubungakanani besango bumiselwe kububanzi bokungena kunye nohlobo lwesango.
Ithegi yokhuseleko Iimpahla:
Ihlobo iimpahla, Ilaphu elikhanyayo njengelokhwe, izikethi, iisuti, i-T-shirt, i-Etagtron ibonelela ngokhuseleko nge-pin encinci ye-16mm okanye eyenziwe yabakhusela. Ngokukodwa kwilaphu lesilika, usebenzisa ithegi ye-Etagtron ene-lanyard ngeqhosha, okungcono ukukhusela umonakalo.
Ithegi yokhuseleko yezihlangu:
Ithegi yokhuseleko yengxowa kunye nempahla:
Ithegi yokhuseleko Izinto zefashoni:
Ungasusa njani iithegi?
Sebenzisa amandla obuchwephesha asuswayo ukususa ithegi yokutshixa ngemagnethi Ukutshixa ngemagnethi, zimbini iintlobo zokutshixa: ilokhi esemgangathweni kunye nesitshixo esikhulu, kwisitshixo esisemgangathweni, ungasebenzisa i-detacher ngamandla ombane wama-8000gs ukuyisusa, kwi-super lock, kufuneka ukusebenzisa i-detacher ngamandla e-magnetic 16000gs.